प्रचण्डले गरे अर्को खुलासा !::Pathivara News
प्रचण्डले गरे अर्को खुलासा !
काठमाडौ माओवादी हेडक्वाटर बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको मौखिक सहमतिको ब्रिफिङ गरेका छन्।
खुमलटारस्थित अध्यक्ष दाहालको निवासमा बसेको बैठकमा दाहालले एमालेसँग द्विअध्यक्षात्मक प्रणाली र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी अन्य नेताले त्यसलाई लिखित रुपमै टुंगो लगाउन अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मा दिएका थिए।
‘सहमतिबारे लिखित रुपमै स्पष्ट भएर जानुपर्छ’, एक नेताले भने, ‘पछि किचलो आउनु राम्रो हुँदैन।’
आजै बिहान भएको दुई पार्टीका अध्यक्षबीचको छलफलपछि दुवै पार्टीको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको हो। एमाले स्थायी कमिटि बैठक भने ललितपुरको मानभवनमा बसिरहेको छ।
आजै पार्टी एकता संयोजन समितिको पनि बैठक बस्ने कार्यक्रम छ।
दुई पार्टीबीच आजै एकता हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
यता वाणिज्यमन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले आफूहरु एमाले–माओवादी केन्द्रवीचको एकताको पक्षमा भएकोले एकतासँगै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र विकासको ढोका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
साक्षात्कारमा बोल्दै नेता विश्वकर्माले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा समानूपातिकतर्फको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाए आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजिनामा आउन सक्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘आयोगले आज मतपरिणाम बुझायो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै साँझ राजिनामा दिनुहुन्छ, हामी तयारी अवस्थामा छौं।’
जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आफूहरुले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विश्वकर्माको विश्वास थियो । उनले भने,‘मृगौला, क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, मुटुरोगीहरुलाई माँसिक पाँच हजार दिने निर्णय गर्यौं, यो निर्णय गर्दा धेरै विरोध गरे।’